आमाको मायाँ ! भारतीय पाइलटलाई पाकिस्तानले रिहा गर्ने भएपछि सन्देशमुलक भाइरल भिडियो! बिबरण सहित हेरी सेयर गरौ – Bihani Post
Home / प्रवासी खबर / आमाको मायाँ ! भारतीय पाइलटलाई पाकिस्तानले रिहा गर्ने भएपछि सन्देशमुलक भाइरल भिडियो! बिबरण सहित हेरी सेयर गरौ
Bihani Post4weeks ago	प्रवासी खबर Leaveacomment 222 Views
भारतमा लोक सभा निर्वाचन नजिक आउँदैं गरेको अवस्थामा भारतीय जनता पार्टीको यो नयाँ रणनीति भएको हुनसक्ने अनुमान पनि धेरैंको रहेको छ । पाकिस्तानी सेनाले हिजो दोहोरो आक्रमणको क्रममा भारतीय वायु सेनाका एकजना पाइलट पक्राउ गरेको थियो । आफ्नो पाइलट रिहा गर्न पाकिस्तानलाई भारतले सुरु देखि नैं अनुरोध गर्दै आइरहेको थियो । यो बिचमा आज पाकिस्तानी संसदमा बोल्दैं खानले आफुले शान्ति चाहेको भन्दैं भोली नैं भारतीय पाइलट रिहा गर्ने जनाउनु भएको छ ।
उहाँले भारतमा अहिले निर्वाचन भएका हुनाले वार्ताजस्ता कुराबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । झण्डैं २० मिनेट जत्ति बोल्नु भएका उहाँले पाकिस्तान भारतसँग डराएर होईन, भोलिको भविष्यका लागि युद्ध नचाहेको बताउँनुभयो । उहाँले पाकिस्तानी सेना कत्तिसम्म शक्तिशाली छ त्यो आफुहरुले देखाएको र भारतको अवस्था कस्तो छ त्यो पनि देखेको बताउँनुभयो ।
उहाँले सुरुवात देखि नैं शान्तिका पक्षमा वकालत गर्दै आउँनु भएको छ । आफ्ना पाइलट पक्राउ परेपछि भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी निर्वाचन प्रचारमा लागेका छन् । अहिले भारतीय जनताको नजरमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान नायक हुनुभएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत पाकिस्तानले युद्ध नगर्ने भन्दैं आफुले मध्यस्तकर्ताको रुपमा काम गर्दै आएको र गर्ने जनाउनु भएको छ ।
पुर्व नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता युसूफ मलालाले पनि भारत र पाकिस्तान बिचको समाधान वार्ता नैं भएको जनाउँनु भएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले विश्वमा भएका हरेक युद्धको उदाहारण दिदैं युद्धले कसैंलाई फाइदा नभएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
चीनको पछिल्लो उदाहारण दिदैं उहाँले आफुले पनि पाकिस्तानमा भएको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीजस्ता कुराहरुमा लडाई गर्दै आएको बताउँनुभएको छ । पाकिस्तानले आफ्नो पाइलटलाई बिना सर्त रिहा गर्ने भए पछि अहिले भारतीय नेता, खेलाडी,कलाकार, सम्पुर्ण जनताले इमरानको यस कदमको खुलेरैं स्वागत गरेका छन् । एजेन्सी
Previous पाइलटले उडाउन सक्दिन भन्दा भन्दै किन उड्यो पाथिभाराबाट हेलिकप्टर ? ‘सीधाकुरा’को श्रद्धाञ्जली ! (भिडियो)
Next स्वर्गीय मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी सहित सातै जनाप्रति अन्तिम श्रद्वान्जली, टुँडिखेलबाट | भिडियो सहित